Gaadhida Degdega ah
A.Markaan gaadhno dalabka oo aan helno lacag bixinta, waxaanu isla markiiba diyaarin doonaa alaabta.Iyadoo ku xiran tirada, alaabtu badanaa waxay diyaar u yihiin shixnadaha 3-5 maalmood gudahood.Haddii ay tahay qayb ka mid ah alaabooyinka, waxaanu hagaajin doonaa alaabta sida waafaqsan alaabta u dhiganta, waxaanan diyaarin doonaa dalabkaaga sida ugu dhakhsaha badan si aad u soo ururiso alaabta.
B.Waxaan leenahay wadashaqeyn toos ah oo leh noocyo kala duwan, oo leh kanaalo qani ah iyo sanado badan oo iskaashi ah, oo leh alaabooyin badan oo alaab ah, iyo alaab tayo sare leh oo la isku halleyn karo.Qaybo yaryar oo alaab ah ayaa si toos ah looga soo diri karaa bakhaarka ka dib marka la helo dalabka.
C.Waxaan leenahay khibrad badan oo ku saabsan soo dejinta iyo dhoofinta, oo aan ula macaamilno si waafaqsan xaaladaha kala duwan ee nidaamka.Laga soo bilaabo habaynta amarka ilaa habaynta shixnadda, waxaanu dhamaystiri doonaa xidhiidh kasta wakhtiga ugu dhakhsaha badan.Waxaas oo dhan waa in badeecada loo keeno macmiilka sida ugu dhakhsaha badan, si uu macaamiishu u helo khibrad wax iibsiga oo wanaagsan.
D.Waxaan leenahay nidaam gaadiid gudbin ah oo dhameystiran oo qaan-gaar ah, waxaana la leenahay wadashaqeyn waqti dheer ah shirkadaha waaweyn ee saadka, waxaana lagu qaadi karaa siyaabo kala duwan.Xaaladaha caadiga ah, waxaan dooran doonaa habka ugu dhaqsaha badan uguna dhaqaalaha badan ee gaadiidka.
Tusaale ahaan, DHL, FedEx, TNT, UPS, Aramex iyo canshuur gaar ah oo ay ku jiraan khadadka gaarka ah (khadka gaarka ah ee Ruushka, khadka gaarka ah ee Belarus, khadka gaarka ah ee Hindiya, khadka gaarka ah ee Koonfur-bari Aasiya)
E.Haddii aadan aqoon sida loo nadiifiyo kastamka, waxaan lahaan doonaa shaqaalaha u dhiganta si ay si firfircoon uga wada shaqeeyaan oo ay kaa caawiyaan in processing nadiifinta kastamka, oo waxaan ururiyey tiro gaar ah oo macaamiisha ah oo dhan adduunka oo dhan, waxaa jira had iyo jeer macaamiil ku hadla la mid ah. luqadda sidaad kaaga caawin karto dhibaatada kastamka kastamka.
Nagu kalsoonow, na dooro, oo wada guulaysta!
Waqtiga boostada: Meey-31-2021